ကီပါနဲ့ နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပြီး VAR ဓားပြကြောင့် FA ဖလားကို လုယက်ခံခဲ့ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး – Sports A2Z
ကီပါနဲ့ နှစ်ပွဲဆက်ရှုံးပြီး VAR ဓားပြကြောင့် FA ဖလားကို လုယက်ခံခဲ့ရတဲ့ ချဲလ်ဆီး
ချဲလ်ဆီးအသင်းဟာ ဒီနေ့ပွဲမှာ စိတ်ချရတဲ့ ဂိုးသမား မန်ဒီအစား လက်ရှိအချိန်အထိ တစ်နေ့ရွှေ တစ်နေ့ငွေဖြစ်နေဆဲဖြစ်တဲ့ ကီပါကို နှစ်ပွဲဆက်တိုက် သုံးစွဲလာခဲ့သလို ပြီးခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲက ခြေစွမ်းမပြနိုင်ခဲ့တဲ့ ချေးလ်ဝဲလ်နေရာမှာတော့ အလွန်ဆိုကို ထည့်သွင်းခဲ့တာကလွဲလို့ လူစုံ ထုတ်ကစားလာခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေ ပြန်လည်ပါဝင်ခွင့်ရလာတဲ့ ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားဖိုင်နယ်မှာ ဘယ်ခြမ်းက ရူဒီဂါ ပြန်ပါလာက အသင်းအတွက် အင်အားဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် အလွန်ဆိုရဲ့ ခံစစ်ပြန်လည်လိုက်ပါမှုတွေ လေးကွေးနေတာက လက်စတာတောင်ပံသမားတွေအဖို့ ပြဿနာရှာစရာ အားနည်းချက်တစ်ခုလည်း ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
နောက်ရာသီမှာ သုံးစွဲမယ့် အင်္ကျီကို စတင်ဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့အနေနဲ့ တိုက်စစ်နဲ့ ကွင်းလယ်ကို ပွဲထွက်လူစာရင်း မတည်ငြိမ်မှုဒဏ် အနည်းငယ်ခံခဲ့ရပြီး တီမို ဗာနာ၊ မေဆန်မောင်နဲ့ ဇီးယက်ရှ်တို့ရဲ့ အတွဲအဖက်နဲ့ ပူးပေါင်းနားလည်မှုကတော့ လိုအပ်ချက်တွေ များနေခဲ့သလို အခွင့်အရေးတွေကိုလည်း သေချာနိုင်တဲ့အထိ မစောင့်ဘဲ ဖြုန်းတီးပစ်နေခဲ့ပါတယ်။
ဂိုးမရှိသရေကျခဲ့တဲ့ ပထမပိုင်းမှာ ဗာနာရဲ့ ဟီးရိုးဖြစ်ချင်ဇောနဲ့ ကြိုးစားပြမှုတွေက အသင်းအတွက်တော့ အဆင်မပြေခဲ့ဘဲ ဂိုးဖြစ်လာနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို စောစောစီးစီး မစခင်ကတည်းက ဆုံးပစ်နေခဲ့သလို ဇီးယက်ရှ်၊ အလွန်ဆိုတို့ရဲ့ လူများပြီး ပွဲမစည်တဲ့ ဘယ်ခြမ်းကိုလည်း ပြင်ဆင်ဖို့ နောက်ကျခဲ့တာက ချဲလ်ဆီးတို့အတွက် နစ်နာစရာတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယပိုင်းပြန်အစမှာတော့ ကွန်တေ တင်ပေးတာကို အလွန်ဆို ခေါင်းတိုက်တာ ဂိုးသမားတည့်တည့် ရောက်သွားခဲ့တာကလွဲလို့ ရင်ခုန်ဖို့ သိပ်မကောင်းခဲ့ဘဲ ပွဲချိန် ၆၃ မိနစ်မှာတော့ ရီးစ်ဂျိမ်းစ် လူပေးမှားရာကနေ ဘောလုံးပြန်ရသွားတဲ့ တီးလီးမန်းက သူ့ကို ပိတ်ဆို့မယ့်သူမရှိချိန်မှာ အဝေးကနေ လှမ်းကန်သွင်းယူခဲ့ရာမှာ ဂိုးသမား ကီပါရဲ့ ဆန့်ထုတ်ကာကွယ်မှုက မမီခဲ့လို့ ဂိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။
Here’s the handball shout from the Chelsea players by Ayoze Perez that lead to the goal. No handball called by referee Michael Oliver. 1-0 Leicester #CHELEI #FACupFinal pic.twitter.com/IPv8hibXXn
— Fair Advantage (@FairAdvantageCA) May 15, 2021
ဒီဂိုးအတွက် ရီးစ်ဂျိမ်းစ် ပေးလိုက်တဲ့ ဘောလုံးကို လိုက်လံဖျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အယိုဇေ ပီရက်ဇ် လက်နဲ့ ထိခဲ့တယ်ဆိုပြီး စောဒကတက်ခဲ့ပေမယ့် ဒိုင်လူကြီးနဲ့ VAR က မျက်ကွယ်ပြုခဲ့လို့ ချဲလ်ဆီးတို့ နစ်နာခဲ့ရပြီး တိုက်စစ်အသင်းက ကစားသမားတွေ ဘယ်နည်းနဲ့မှ လက်နဲ့ ထိခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့ ဥပဒေသကို နားမလည်ကြသေးတာနဲ့ Double Standard တွေ ဖြစ်နေခဲ့တာကလည်း ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။
ပွဲချိန် ၆၈ မိနစ်မှာတော့ ဇီးယက်ရှ်အစား ပူလီရှစ်ချ်၊ အလွန်ဆိုအစား ချေးလ်ဝဲလ်တို့ကို လူစားထည့်သွင်းခဲ့ပြီး ၇၆ မိနစ်မှာတော့ ဂျော်ဂျင်ညို အစား ဟာဗတ်ဇ်၊ အက်ဇ်ပီလီကွေတာအစား ဟဒ်ဆန်-အိုဒွိုင်းတို့ကို လူစားလဲခဲ့ပြီး ချေးလ်ဝဲလ်ရဲ့ ၇၇ မိနစ်ခေါင်းတိုက်ချက်က တိုင်ထိခဲ့လို့ ချေပဂိုးနဲ့ လွဲချော်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ရှမိုက်ကယ်ကတော့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ထိုးဖောက်မှုတွေကို လက်စွမ်းပြ ကာကွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန် ၈၉ မိနစ်မှာတော့ ချေးလ်ဝဲလ်ရဲ့ ထိုးဖောက်မှု ကနေ လက်စတာနောက်ခံလူတွေ ရှင်းထုတ်ရာမှာ သူနဲ့ပဲထိပြီး ပြန်ဝင်သွားခဲ့ပေမယ့် လိုတာထက်ပိုပြီး တိကျလွန်းနေတဲ့ VAR က လူကျွံတယ်ဆိုပြီး ပယ်ဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။
VAR ရဲ့ စည်းမျဉ်းအရ လူတစ်ယောက်ဟာ ရှေ့ကို ပြေးမယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းကို နောက်မှာထားပြီး ပြေးရမလိုဖြစ်နေပြီး ဂိုးသွင်းရာမှာ ပါဝင်မှု သိပ်မရှိတဲ့ ကိုယ်လုံးဟာ Football လို့ ခေါ်တဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ကန်ရတဲ့ ကစားနည်းမှာ လူကျွံဘောဖမ်းစရာဖြစ်နေတာကတော့ ဒီကစားနည်းအတွက် ကြီးစွာသော ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာလည်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
ပွဲချိန်အပြည့်မှာတော့ VAR ရဲ့ မျက်နှာလိုက်မှု နှစ်ခုနဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ ဖလားတစ်လုံး ဓားပြတိုက်ခံခဲ့ရပြီး လက်စတာတို့ကတော့ လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့ မထိုက်တန်ခဲ့တဲ့ အက်အေဖလားကို အချိုအချောင် ရယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီး လာမယ့်ရာသီမှာ ဗီဒီယိုဒိုင်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာတော့မယ်လို့ ထင်မြင်မိကြောင်း သုံးသပ်ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ZAWGYI: ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းဟာ ဒီေန႔ပြဲမွာ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဂိုးသမား မန္ဒီအစား လက္ရွိအခ်ိန္အထိ တစ္ေန႔ေ႐ႊ တစ္ေန႔ေငြျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တဲ့ ကီပါကို ႏွစ္ပြဲဆက္တိုက္ သုံးစြဲလာခဲ့သလို ၿပီးခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္နဲ႔ပြဲက ေျခစြမ္းမျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ ေခ်းလ္ဝဲလ္ေနရာမွာေတာ့ အလြန္ဆိုကို ထည့္သြင္းခဲ့တာကလြဲလို႔ လူစုံ ထုတ္ကစားလာခဲ့ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြ ျပန္လည္ပါဝင္ခြင့္ရလာတဲ့ ပြဲတစ္ပြဲျဖစ္တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလားဖိုင္နယ္မွာ ဘယ္ျခမ္းက ႐ူဒီဂါ ျပန္ပါလာက အသင္းအတြက္ အင္အားျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ အလြန္ဆိုရဲ႕ ခံစစ္ျပန္လည္လိုက္ပါမႈေတြ ေလးေကြးေနတာက လက္စတာေတာင္ပံသမားေတြအဖို႔ ျပႆနာရွာစရာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ခဲ့တာပါ။
ေနာက္ရာသီမွာ သုံးစြဲမယ့္ အက်ႌကို စတင္ဝတ္ဆင္ခဲ့တဲ့ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔အေနနဲ႔ တိုက္စစ္နဲ႔ ကြင္းလယ္ကို ပြဲထြက္လူစာရင္း မတည္ၿငိမ္မႈဒဏ္ အနည္းငယ္ခံခဲ့ရၿပီး တီမို ဗာနာ၊ ေမဆန္ေမာင္နဲ႔ ဇီးယက္ရွ္တို႔ရဲ႕ အတြဲအဖက္နဲ႔ ပူးေပါင္းနားလည္မႈကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ မ်ားေနခဲ့သလို အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း ေသခ်ာႏိုင္တဲ့အထိ မေစာင့္ဘဲ ျဖဳန္းတီးပစ္ေနခဲ့ပါတယ္။
ဂိုးမရွိသေရက်ခဲ့တဲ့ ပထမပိုင္းမွာ ဗာနာရဲ႕ ဟီး႐ိုးျဖစ္ခ်င္ေဇာနဲ႔ ႀကိဳးစားျပမႈေတြက အသင္းအတြက္ေတာ့ အဆင္မေျပခဲ့ဘဲ ဂိုးျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေစာေစာစီးစီး မစခင္ကတည္းက ဆုံးပစ္ေနခဲ့သလို ဇီးယက္ရွ္၊ အလြန္ဆိုတို႔ရဲ႕ လူမ်ားၿပီး ပြဲမစည္တဲ့ ဘယ္ျခမ္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ဖို႔ ေနာက္က်ခဲ့တာက ခ်ဲလ္ဆီးတို႔အတြက္ နစ္နာစရာေတြလည္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းျပန္အစမွာေတာ့ ကြန္ေတ တင္ေပးတာကို အလြန္ဆို ေခါင္းတိုက္တာ ဂိုးသမားတည့္တည့္ ေရာက္သြားခဲ့တာကလြဲလို႔ ရင္ခုန္ဖို႔ သိပ္မေကာင္းခဲ့ဘဲ ပြဲခ်ိန္ ၆၃ မိနစ္မွာေတာ့ ရီးစ္ဂ်ိမ္းစ္ လူေပးမွားရာကေန ေဘာလုံးျပန္ရသြားတဲ့ တီးလီးမန္းက သူ႔ကို ပိတ္ဆို႔မယ့္သူမရွိခ်ိန္မွာ အေဝးကေန လွမ္းကန္သြင္းယူခဲ့ရာမွာ ဂိုးသမား ကီပါရဲ႕ ဆန႔္ထုတ္ကာကြယ္မႈက မမီခဲ့လို႔ ဂိုးေပးခဲ့ရပါတယ္။
ဒီဂိုးအတြက္ ရီးစ္ဂ်ိမ္းစ္ ေပးလိုက္တဲ့ ေဘာလုံးကို လိုက္လံဖ်က္ထုတ္ခဲ့တဲ့ အယိုေဇ ပီရက္ဇ္ လက္နဲ႔ ထိခဲ့တယ္ဆိုၿပီး ေစာဒကတက္ခဲ့ေပမယ့္ ဒိုင္လူႀကီးနဲ႔ VAR က မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့လို႔ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔ နစ္နာခဲ့ရၿပီး တိုက္စစ္အသင္းက ကစားသမားေတြ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ လက္နဲ႔ ထိခြင့္မရွိဘူးဆိုတဲ့ ဥပေဒသကို နားမလည္ၾကေသးတာနဲ႔ Double Standard ေတြ ျဖစ္ေနခဲ့တာကလည္း ထင္ရွားခဲ့ပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္ ၆၈ မိနစ္မွာေတာ့ ဇီးယက္ရွ္အစား ပူလီရွစ္ခ်္၊ အလြန္ဆိုအစား ေခ်းလ္ဝဲလ္တို႔ကို လူစားထည့္သြင္းခဲ့ၿပီး ၇၆ မိနစ္မွာေတာ့ ေဂ်ာ္ဂ်င္ညိဳ အစား ဟာဗတ္ဇ္၊ အက္ဇ္ပီလီေကြတာအစား ဟဒ္ဆန္-အိုဒြိဳင္းတို႔ကို လူစားလဲခဲ့ၿပီး ေခ်းလ္ဝဲလ္ရဲ႕ ၇၇ မိနစ္ေခါင္းတိုက္ခ်က္က တိုင္ထိခဲ့လို႔ ေခ်ပဂိုးနဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရျပန္ပါတယ္။
ရွမိုက္ကယ္ကေတာ့ ခ်ဲလ္ဆီးရဲ႕ ထိုးေဖာက္မႈေတြကို လက္စြမ္းျပ ကာကြယ္သြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္ ၈၉ မိနစ္မွာေတာ့ ေခ်းလ္ဝဲလ္ရဲ႕ ထိုးေဖာက္မႈ ကေန လက္စတာေနာက္ခံလူေတြ ရွင္းထုတ္ရာမွာ သူနဲ႔ပဲထိၿပီး ျပန္ဝင္သြားခဲ့ေပမယ့္ လိုတာထက္ပိုၿပီး တိက်လြန္းေနတဲ့ VAR က လူကြၽံတယ္ဆိုၿပီး ပယ္ဖ်က္သြားခဲ့ပါတယ္။
VAR ရဲ႕ စည္းမ်ဥ္းအရ လူတစ္ေယာက္ဟာ ေရွ႕ကို ေျပးမယ္ဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္အေပၚပိုင္းကို ေနာက္မွာထားၿပီး ေျပးရမလိုျဖစ္ေနၿပီး ဂိုးသြင္းရာမွာ ပါဝင္မႈ သိပ္မရွိတဲ့ ကိုယ္လုံးဟာ Football လို႔ ေခၚတဲ့ ေျခေထာက္နဲ႔ ကန္ရတဲ့ ကစားနည္းမွာ လူကြၽံေဘာဖမ္းစရာျဖစ္ေနတာကေတာ့ ဒီကစားနည္းအတြက္ ႀကီးစြာေသာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာလည္းျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။
ပြဲခ်ိန္အျပည့္မွာေတာ့ VAR ရဲ႕ မ်က္ႏွာလိုက္မႈ ႏွစ္ခုနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးတို႔ ဖလားတစ္လုံး ဓားျပတိုက္ခံခဲ့ရၿပီး လက္စတာတို႔ကေတာ့ လက္ရွိေျခစြမ္းနဲ႔ မထိုက္တန္ခဲ့တဲ့ အက္ေအဖလားကို အခ်ိဳအေခ်ာင္ ရယူသြားႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာမယ့္ရာသီမွာ ဗီဒီယိုဒိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ပိုမိုျပင္းထန္လာေတာ့မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိေၾကာင္း သုံးသပ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္။
16 May နံနက်ခင်း နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ်သတင်းများ စုစည်းမှု
15 May နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု
ပဲလေ့စ်နဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်ကစားပြီးနောက် ရန်းနစ်ခ်အတွက်...
ဖောင်ပျက်နေတဲ့ အမျိုးသားတွေကို FA ဖလားနဲ့...